Noho ny aretin'ny taovam-pisefoana dia maty tampoka ny rain'i Laura, tamin'izay anefa dia vao teraka i Amanda zandriny. Vao roa taona monja i Laura tamin'izay. Nanokatra fivarotana kojakojan-jaitra ny reniny mba hiveloman'izy telo mianaka ireto, nefa nisy nandroba io fivarotana io ka voatery nitady ravin'ahitra tany Argentine izy ireo. Rehefa tsy nahomby tamin'ny asany i Mercedes Pino, ny renin'i Laura izany, dia nanao fifanarahana ho mpiasa an-tranon'i Manuel Mora, mpanefoefo tao an-tanàna, izy. Tsy araka izany anefa fa nivadika tamin'ny fifanarahana ity lehilahy ity ka noviravirainy i Pino ary nanaovany herisetra. Nitaraina ihany i Mercedes Pino fa tsy nahita haleha ka dia nihafy tao ihany.
Vao tonga tany Argentine tamin'izany fotoana izany ny Masera Salezianina Filles de Marie Auxiliatrice, ary nanokatra sekoly ho an'ny tovovavy ny volana janoary 1899. Herintaona tao aorian'io, izany hoe ny taona 1900, nalefan-dreniny nianatra tany koa i Laura sy i Amanda zandriny. Ilay lehilahy niasan-dramatoa Mercedes Pino moa no niantoka ny fianaran'izy mirahavavy ireto. Ny tanjon'io lehilahy io tamin'izany dia ny hampakatra an'i Laura ho vadiny ao aoriana kely. Na dia teo aza ny alahelon'i Laura nisaraka tamin-dreniny fony izy nijanona tany amin'io sekolin-dry Masera io, dia nahatsiro sambatra izy niaraka tamin'ny mpampianatra tanora mafana fo. Natao Kômonio voalohany i Laura, herintaona taorian'ny nahatongavany tao ary nanapa-kevitra izy ny hitia an'Andriamanitra manontolo, hanao sorona ny tenany ary hifidy ny fahafatesana toy izay ny fahotana, hampahafantatra an'i Jesoa sy hanonitra ireo ota vita taminy, toa an'i Dominique Savio.
Indray andro, nahatsapa i Laura fa niaina tao anatin'ny fahotana ny reniny ka dia nanaolo-tena ho an'Andriamanitra izy ho fanonerana izany. Nampitomboiny ny famolahan-tenany, ary nivoady ny hanaraka ny Soratra Masina izy rehefa nifanaiky tamin'ny mpampikônfesy azy. Reraky ny fanaovana sorona ny tenany sy ny aretina izy taty aorina. Ny alina farany nahavelomany dia nilaza ny tsimbaratelony tamin'ny reniny izy nanao hoe: "Neny ô, hofaty aho. Efa ho roa taona izao no nangatahako tamin'i Jesoa Kristy ary nanolotra ny tenako taminy aho ho famonjena anao mba hiverenanao amin'Andriamanitra. Neny ô, alohan'ny handehanako, moa mba afaka mifaly ve aho? Hahita ny fibebahanao?". Dia hoy Ramatoa Pino reniny nampanantena azy: "Rahampitso maraina, hiaraka amin'i Amanda aho ary hikônfesy". Dia hoy i Laura tamin'ilay pretra nanatrika teo: "Ianao no vavolombelon'ny fampanantenany, ary nampiany, Misaotra Jesoa ô! Misaotra Maria! Ankehitriny, an-kafaliana no hafatesako". Dia tao anatin'izany hafaliana izany no nodimandry ny 22 janoary 1904 i Laura Vicuña.